Maamulka gobalka Hiiraan & Al-Shabaab oo kala wareejistay maxaabiis ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Maamulka gobalka Hiiraan & Al-Shabaab oo kala wareejistay maxaabiis
Maamulka gobalka Hiiraan & Al-Shabaab oo kala wareejistay maxaabiis
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay ka shaqeeyeen sidii maxaabiis ay isku dhaafsan lahaayeen Al shabaab iyo maamulka Hiiraan.
Al-Shabaab ayaa gacanta ku hayay askari ka tirsan Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya,kaasi oo ay shirqooleen dad uu khilaaf kala dhaxeeyay, xili uu ku sugnaa magaalada Beledweyne.
Maamulka gobalka Hiiraan ayaana kadib waxaa la sheegay inay xireen seddex ruux oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen in askariga loo gacan geliyo Al shabaab.
Maamulka ayaa dadkaasi markii la xiray u sheegay odayaasha iyo wax garadka ay dadkii xirnaa kasoo jeedeen in haddii ay u baahanyihiin in dadkan lasii daayo iyagane ay keenaan Askarigii ay Al-shabaab u gacan giliyeen.
Dadaalo dheer oo ay sameeyeen odayaal, wax garad iyo ganacsato ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in Al-shabaab ay kasoo daayaan Askarigii loo geeyay, si loo sii daayo sedax ruux oo ka kooban oday, ganacsade iyo wade gaari oo dhacdadaasi lagu eedeeyay in ay ka qeyb ahaayeen dadkii askariga dhiibay.
Askariga ka tirsanaa guuta shanaad qeybteeda 27-aad ayaa lagu wareejiyay labo cisho kahor taliska maamula guutada uu ka tirsanaa, halka maanta dadkii eedeysanayaasha ahaa Reerahoodii lagu wareejiyey.
Maamulka gobalka Hiiraan ayaa ku guuleystay in ay sameeyaan xiriir ay isku dhaafsanayaan maxaabiis ay labada dhinac kala heysteen, waxaana arinkaan sabab u ah Odayaasha Dhaqanka magaalada Beledweyne kuwaa oo dadaal badan u maray sidii uu arinkaan ku suurto gali lahaa.
Previous articleDaawo:- Maxa kala qabsaday Abeeso nool & Mid caag ka sameysan!!
Next articleQarax Injineero Somali iyo Ajaaniib ah lagula eegtay duleedka Muqdisho